Hogaamiye Kasta Waxa Lagu Cabiraa Garaadkiisa Dadka Uu Isku Xeero’ Taariikhdiisana Iyagaa Tusaale u Noqda | Marsa News
Hogaamiye Kasta Waxa Lagu Cabiraa Garaadkiisa Dadka Uu Isku Xeero’ Taariikhdiisana Iyagaa Tusaale u Noqda
August 19, 2018 - Written by editor marsan
Niccollo Machiavelli oo ahaa qoraa iyo faylasuuf loogu yeedho aabihii cilmiga siyaasadda ee casriga ah ayaa laga hayaa, “Habka ugu horreeya ee lagu qiimeeyo garaadka ruuxa xukunka hayaa waa in la eego dadka uu isku xeeray”
Waxa aana marar badan dhacda in hoggaamiyaha oo niyadwanaag iyo samaan ka talinaya, waxqabadna diyaar u ahi uu ka tallaabsan kari waayo, dadka ku xeeran oo aanu dareensanayn in ay dabar ku yihiin doonistiisaas fiican.
Sulaymaan Bin Cabdalmalik oo ahaa hoggaamiyihii toddobaad ee dawladdii Umawiyiinta, ayaa inkasta oo uu ahaa hoggaamiye caddaaladda iyo maamulwanaagga lagu arkay awgeed, jacaylka ay dadkiisu u qabeen uu gaadhay in ay ku naanaysaan ‘Furihii khayrka’, haddana ay weli jirtay in laga cabanayey dadka uu isku xeeray. Waxa se uu noqday hoggaamiye garaad badan oo dhegeystay dhaliisha kuwa ku xeeran loo jeedinayo, kana feejignaaday.
Haddaba, hoggaamiye kasta waxaa ku xeeran dad ay taladooda iyo sheekadoodu saamayn ku yeelato go’aamada iyo fikirka uu dalka ku hagayo. Nasiibdarro waxaa in badan dhacda in dadkaas hoggaamiyeyaasha ku xeerani ay noqdaan kuwo fursadaas uga faa’iidaysta danahooda gaarka ah oo keliya iyo dad u samaysan marinhabaabinta hoggaamiyaha iyo in ay mansabyada loo dhiibo ka hodmaan. Dadkaasi qaranka waxa ay ku yihiin hagardaamo, waa se haddii aanu hoggaamiyuhu noqon ruux baraarugsan oo cidda uu diranayo iyo cidda warka u keenaysaba uga xogogaalsan waxa uu u diranayo, ama aanu lahayn tabo uu ku hubin karo xogtooda iyo dabeecadda ah in wax kasta oo soo gaadha uu maankiisa la kaashado.
Muhiimadda waxa ay tahay in hoggaamiye kastaa wanaag iyo xumaan waxa uu yeelanayo, sida uu xukunkiisu noqonayo iyo taariikhda u qormaysaaba ay noqonayso mid ku jaango’an hadba nooca ay yihiin dadka ku xeeran, ee uu talada ka qaato, sirtana u dhiibto, iyo sida uu ka yeelo talooyinka iyo aragtiyaha uga imanaya dadkaas.
Hoggaamiyihii midowga Soofiyati ee Khrushchev oo ahaa nin saamayn badan ku lahaa xukunka, ayaa mar ka sheekeeyey sida uu uga feejiganyahay dadka ku xeeran. Waxa uu sheegay in uu gacanyareyaashiisa ku amray in warbixinnaha iyo xogaha ay u soo gudbinayaan ay u qaybiyaan laba qaybood;
Qaybta hore oo ah warbixinaha muhiimka ah ee ay waajibka tahay in uu si xeeldheer u wada akhriyo, jawaab, go’aan qaadasho iyo tallaabooyin kale wixii ku haboonna uu ka qaato; iyo qayb kale oo ay ku ururiyaan warbixinaha iyo wararka aan hubaantida ku qotomin ama aan qiimaynta mudnayn ee ay fiican tahay in aanu waqti badan ku lumin akhriskooda, maadaama oo aanay talo iyo tallaabo la qaadaa ka dhalanayn.
Qisada oo iyada oo faahfaahsan Qur’aanka Kariimka ahi ka warramay, waxa aynu uga gol leenahay sida uu hoggaamiyuhu dadkiisa iyo dalkiisa u badbaadin karo, haddii uu yahay ruux soo jeeda oo dadka ku xeeran iyo gacanyareyaashiisa iska xakamayn kara, taladoodana hubsiimo iyo xog-ogaalnimo ku dara, wixii ay u soo jeediyaanna maankiisa la kaashada.